Koofiyadaha Mob, Maqaar-bixiyeyaasha Caafimaadka, Dareerayaasha aan tolmo lahayn - JPS
galoofka baaritaanka cinjirka ah
Dharka la tuuro
Qalabka caafimaadka aasaasiga ah
duub warqad sariirta
Waxyaabaha jeermiska looga dhigo
BD tes bac
Guud ahaan Microporous oo leh Cajalad Koolo ah
Dharka la tuuro-3 faashad faashad aan tolmo wanaagsan lahayn ...
3 Maaskarada Wajiga Madaniga ah ee loo yaqaan 'Ply Non-xidh-Non-Woven wajiga' leh Earloop
Gacmo gashiyada Imtixaanka Latex
Gacmo gashi nitrile budada ah waa bilaash
Gacmo gashiyada buluuga ah ee Vinyl ee la tuuro Karo budada ah
Suitska xoqida la tuuro
Dharka Qalliinka ee caadiga ah ee SMS
Cajalado Fenestrated Flex Festestrated Iyadoo aan Cajalad lahayn
Dharka Qalitaanka ee Qalitaanka ee Neefsashada ah
Xirmada Qalliinka La Tuuri karo
Hal xal oo joogsi ah
Waxaan siinaa badeecado ilaaliya madax ilaa cirib
Xirfadle iyo Diirad saarid
Iyadoo leh 20 + sano oo khibrad ah si loo dhoofiyo qashinka caafimaadka
Aaminaad iyo xasilloon
Diirada saar iibka kahor iyo kan iibka kadib
Isticmaal Maalinle ah Cudbi Cudub Cudurka Buugga Nidaamka Nadiifinta Badan iyo Bacriminta
Astaamaha Fadlan la soco in qalabyada kale aysan ku jirin. 100% tayada cusub ee la adeegsan karo: guud ahaan Waxsoosaarka Wax soo saarka: Cudurka soo saarka cudbiga: Ka sameysan Ayax dabiici ah, jilicsanaan jilicsan, daaweynta heerkulka sare, nadiif iyo nadaafad leh - Xul sare
Anti baxsiga la tuuro Qalliinka Qalliinka jilicsan Dareen xoog Adsorption Kartida
Sharaxaad Jilicsan, hawo leh, xoogna leh (anti-daadashada) awoodda xayeysiinta, go'doomi boodhka iyo bakteeriyada, ka ilaali qolofta iyo timuhu inay dhacaan. Kala saar dareere sida aalkolo, dhiig, saliid, biyo. Jilicsan, siman oo raaxo leh Waxaa loo isticmaalaa Caafimaadka, Cuntada ...
Dhismaha Kooxda JPS ee Hangzhou
Shanghai JPS Medical Co., Ltd. oo la aasaasay 2010, waa soo saare xirfadle ah isla markaana ah alaab-qeybiyaha wax-soo-saarka iyo ka-hortagga, jeermiska iyo xalka jeermiska looga dhigo
Shahaadooyinkeena ISO13485 iyo CE oo ka badan 60 alaab caafimaad oo ay soo saartay TUV ee Jarmalka.
Waxaan haynaa koox khibrad leh oo R & D ah, kooxda QC iyo kooxda adeegga.
Wax soo saarkayaga ayaa loo dhoofiyay in ka badan 80 dal iyo gobollo ay ku jiraan suuqa gudaha ee Shiinaha.
1. Ku xoogan R & D: waxaan soo saari karnaa oo soo bandhigi karnaa badeecooyin habeysan si loo daboolo shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha.
2. Tayo lagu kalsoonaan karo: waxaan si adag u raacnaa shuruudaha ISO13485. Kooxdayada QC waxay leedahay khibrad ku dhow 20 sano soo saarista iyo keenista difaaca, jeermiska, xalka jeermiska iyo wax soo saarka.
3. Qiime macquul ah: tirada badan oo jirta awgeed, oraahdeenu marwalba waa mid tartan badan.
4. Bixinta degdegga ah: waxaan had iyo jeer haynaa badeecooyin caadi ah oo macquul ah si loo soo gaabiyo waqtiga dhalmada.
5. Shahaadooyinkayaga ISO13485 iyo CE oo ka badan 60 alaab caafimaad oo ay soo saartay TUV ee Jarmalka, kuwaas oo buuxin kara shuruudaha inta badan shuruudaha qandaraaska qandaraaska ee Dawladda.